Akụkọ - Ihe ekwesịrị ị bea ntị na ya na iji akwa mpempe akwụkwọ aluminom na mpempe akwụkwọ dị na mpụga
Aluminium foil na-eguzogide eriri nwekwara ike-akpọ seramiiki eriri na aluminum silicate eriri. Ceramic fiber bụ isi ihe nnọchianya nke eriri ọkụ na-eguzogide ọkụ n'ụzọ sara mbara, nke bụ aha n'ozuzu nke alumina, silica, aluminum silicate na zirconia fiber na-eguzogide ọkụ. Ka ọ dị ugbu a, eriri na-eguzogide ọkụ nwekwara eriri carbon, fiber nitride, eriri boride na eriri oxide na-abụghị nke oxide. N'echiche dị warara, naanị silicate silicate gbazee ma ọ bụ oxidized Naanị eriri nwere sol fibrosis nwere ike ịbụ eriri seramiiki.
Ntị nke aluminom foil ákwà na usoro nke mpụga mkpuchi oyi akwa:
1. ọkpụrụkpụ nke mpụga mkpuchi oyi akwa: ịgba uru nke okpomọkụ nyefe ọnụọgụ na ike ịzọpụta imewe ọkọlọtọ bụ kacha nta chọrọ nke ọkọlọtọ, na obodo okpomọkụ akwa ga-ezere. Mgbe a na-eji ihe eji emepụta ihe na-emepụta ihe mkpuchi ígwè, a ga-ekpebi ọkpụrụkpụ mkpuchi mkpuchi dị ka nsonaazụ nha. Iji belata nnyefe ọkụ na oriri ọkụ nke mgbidi, ọ bụghị naanị ịbawanye ọkpụrụkpụ nke mkpuchi mkpuchi. UK na-ele mkpuchi, mkpuchi na ikuku ikuku nke mgbidi ahụ dum.
2. Ọrụ mkpuchi mpụga: Ọ bụ ezie na mkpuchi ahụ nwere mmetụta mkpuchi ụfọdụ, ọ bụghị nha anya na ikpuchi ọkụ, karịsịa na oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ na oge oyi. E wezụga omume nke okpomoku ihu igwe, ekwesịrị ịtụle arụmọrụ mkpuchi mkpuchi ọkụ na usoro a kwesịrị ịmalite.
3. Usoro mkpuchi ọ bụla nwere ngwaahịa sistemụ, arụmọrụ teknụzụ nke ihe ọ bụla mejupụtara ga-agbaso ụkpụrụ dị mkpa. A ghaghị itinye mgbidi mkpuchi mpụga na mgbidi iji mepụta. Ya mere, ekwesịrị iji nlezianya tụlee arụmọrụ nke usoro ahụ, n'ihi na ọ na-ebute ihe dị iche iche dị n'èzí ma na-ezute ihe mkpuchi ọkụ.
N'elu bụ nlezianya nke akwa aluminium na usoro nke iji akwa mkpuchi mkpuchi. N'ozuzu, nke ọ bụla nwere uru nke ya. Anyị nwere ike ịrụ ọrụ dịka ọnọdụ ha si dị. Enwere m olileanya na isiokwu a nwere ike inyere gị aka.
Post oge: Mee-13-2021